Lovia lehibe ao Sri Lanka ~ Journey-Assist - Ny tena matsiro sy malaza
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Masakan'i Sri Lanka » Lovia lehibe
Lovia lehibe ao Sri Lanka. Ny malaza indrindra!
Na dia eo aza ny zava-misy fa ny fototry ny lovia maro dia ny vary, ny karazana lovia lehibe ao Sri Lanka, na izany aza, dia mirehareha. Misy lasopy be isan-karazany, ary atody na vary trondro miaraka amin'ny loto maloto isan-karazany, sy ny Kotu Roti malaza, ary ny sakafo isan-karazany, ary ny karazana fihodinana haingana, toy ny laisoa isan-karazany.
Ny lovia malaza indrindra amin'ny sakaosy Sri Lankan:
Sira sy Nasiana (Curry & Rice)
Nofin-tsoavaly / vary
Trondro trondro misy mariloto
Trondro Mahi Mahi
Grilled Squids (Grillerd Calamari)
Lohasaha Falehan-driaka (vadi)
Lankan Omelet (Sri Lankan Omelet)
Papomba Tortilla Soup (Soup & Papadam)
Masira miaraka amin'ny Nasiana
Ny sakao sy ny vary no tena sainan'ny mponina ao an-toerana, fa misy karazany maro an'Iry. Miankina amin'ny eritreritra sy ny tiany fotsiny amin'ny mpahandro izany.
Ny saka dia mety ho avy amin'ny legioma, anana, hazan-dranomasina isan-karazany, akoho, trondro, voanjo ary misy voankazo mihitsy aza. Ny fantsom-boankazo lehibe nofinidy nofy dia atody ary andrahoina amin'ny ronono voanio miaraka amin'ny fametahana tsy maintsy aorina ny andiany fototra amin'ny zava-manitra - sira, dipoavatra mainty, coriander, dipoavatra mavokely, voan-tsaramaso, voa afovoany, kanelina, turmeric, laisoa, tongolo ary tena ravina kari. Matetika ireo karazana 3-4 andrahoina amin'ny fotoana iray. Arotsaho eo ambonin ny lovia iray misy ny mason-kena.
LEHIBE! Izay kari rehetra, raha ny mahazatra, dia tena be dia be.
Maloto, saingy mazotozendana misy kapoaka matevina, izay omena amin'ny koba mifototra amin'ny voan-dronono sy lafarinina. Matetika voaendy ireo mpihaza, fa indraindray mifofona ihany koa. Raha ny famenoana, atody, legioma, fifangaroana am-paosy nopotehina sy voasarimakirana, dia azo ampiasaina ny additives mamy isan-karazany.
Vonona amin'ny vary izy, izay andrahoina voalohany amin'ny ron-kena, ary avy eo nofonosina ravina akondro ary nendasina tamin'ny hena, kari sy saosy mafana. Matetika, chutney dia ampiana koa ao - saosy iray izay manana tsirony maranitra sy mamy ary masira.
Io lovia io dia namboarina tamin'ny mofo - kôkômbra vita amin'ny voanio, izay potipotina ary afangaro amin'ny legioma voatoto (laisoa, kesika, karaoty), ary koa ny fromazy sy / na atody. Ny zava-manitra malaza indrindra amin'ny cottu dia poavety chili. Ny Cottu dia tena fahita amin'ny toeram-pisakafoanana am-pisakafoanana any Sri Lanka, mety ho hita ao amin'ny trano fisakafoanana tsara na any anaty trano fisakafoanana eny an-dalambe izany.
Ny tena teny hoe Kotu dia midika hoe "voapetaka".
Ka vonona i Koththu
Aleo mangahazo ny vary basmati, avy eo afangaro ao anaty lapoaly misy leek, legioma, atody, zava-manitra ary zavatra hafa, toy ny akoho na hazan-dranomasina.
Mofomamy mivelatra vita amin'ny vary na lafarinina varimbazaha. Toa ny takelaka vermicelli izy ireo. Soanambo. Trano mate maldivian matetika ny famenoana (trondro maina misy saosy umbalakada), Dal (lentika / voanjo masaka / voanjo), legioma kari, ary koa misy zavatra mamy fangaro isan-karazany.
Fangaro maloto misy saosy mangotraka fotsy sy mena efa afangaro amin'ny rano sy voaniho maintso, indraindray misy zava-manitra. Voarakitra anaty lambam-bohitra. Notolorana karazana kari, saosy sy sosy, legioma ary mofo papadamala, ary na sôkôla vaovao mamy aza.
Ity dia lasopy volontany mena afangaro amin'ny ronono voanio, miaraka amina fampangaroana fangaro amin'ny legioma (tongolobe, tongolobe, voatabia, dipoavatra). Ny ranom-boankazo sy ny voasarimakirana dia ampiana amin'ny kari be dal. Ny lovia ny tenany dia mahaleo tena, fa matetika kosa dia mihinana miaraka amin'ny vary, voankazo misy kari.
Ny trondro, ao anatiny ary dia tena matsiro sy matsiro. Afangaro mangotraka tongolo gasy, laisoa, lava-boanjo, ahitra sy voatabia eo an-toerana dia matetika ampiasaina ho toy ny sira. Masaka ao anaty grill. Amin'ny maha lafiny lovia, matetika ny vary nendasina misy papadamis na salady dia matetika ampiasaina.
Voankazo sy malefaka ny trondro. Voalamina, asiana filma endrika. Ny boninkazo dia mety ho french fries miaraka amin'ny salady na mofomamy papadam.
Lovia amin'ny hazan-dranomasina malaza. Arotsaka ao anaty grill io, aorian'ny fampandroana ny sôkôla ao anaty lasopy manokana na saosy. Ao amin'ny endriky ny vilia lovia (matsiro sy mahazatra), frantsay frantsay, antsoina ao amin'ny menio Chips.
Ny legioma eto matetika dia tena tsotra. Tomato, kôkômbra, laisoa, laisoa, na ny anana. Ny foto-kevitra momba ny fanaovana salady dia tsy hita eto matetika amin'ny ankamaroan'ny tranga. Satria afaka miangona amin'ny zavatra nentim-paharazana ireo, toy ny ranom-boasary miaraka amin'ny menaka.
Iray amin'ireo salady ao amin'ny sakafo ao Sri Lankan. Vonona ho an`ny zana-boadom-bazaha centella asiatica (Centella asiatica - heverina ho tena fanafody masiaka eo an-toerana), tongolobe, trondro Maldivian (trondro maina misy voatavo, voatsipiky ny vovony) umbalakada), voaniho voanio sy ranom-boasary makirana.
Papadam (Papama manontolo)
Karazana mofomamy iray hafa ity. Masiaka tokoa izy ireo, vita amin'ny vary, tsaramaso na lafarinina lentilà, izay matetika omena sira sy zava-manitra. Matetika izy ireo dia misakafo vary misy voaroy. Na izany aza, ampiasaina miaraka amina legioma sy trondro sy saosy isan-karazany ihany koa izy ireo, anisan'izany ny mamy.
Azo atolotra amin'ny ankapobeny na amin'ny endritsoratry ny "sokola".
Ny voantsorantely dia manondrana voankazo maitso, tongolo, ravina kariera ary zava-manitra isan-karazany. Fanomanana lalim-nendasina. Heverina ho sakafo an-dalambe, amidy any amin'ny andrim-panjakana mahazatra amin'ny sakafo mahazatra.
Tortilla vita amin'ny lafarinina varimbazaha. Matetika dia ahitana aditifitra avy amin'ny akoho, trondro, zava-manitra, voanio voatoto, tongolobe, voankazo maitso. Matetika ny mofo dia asiana ho famenoan'ny lovia lehibe, ho toy ny sakafo mahandro misy saosy. Ampiasaina koa ho fototry ny toppings mamy, tantely palmie na ronono condens.
Ity dia sakafo mahavelona, ​​matetika vita amin'ny voanio dipoavatra, trondro kely maina, tongolobe, voaniho sy ranom-boasary makirana. Manana karazany maro izy.
Tsy matsiro, fa tena masiaka kosa ny karazany iray dia mifangaro voankazo mamy, fromazy ary anana nopotehina amin'ny menaka mavo.
Patty, mazàna endrika telozoro endrika, vita amin'ny koba atody. Ny famenoana dia mety ho mamy, spicy (matetika), manitra ary sira. Ny fototry ny famenoana dia mety ho fampangaroana isan-karazany ny trondro, akoho, legioma, atody, kari.
Omelet voa afangaro amin'ny menaka voanio miaraka amin'ny zava-manitra sy legioma (maintso tongolo mena, tsaramaso maintso voatoto maintso, voatabia) ary ravina curry. Omara nentim-paharazana Sri Lankan dia voaomana raha tsy misy ronono.
Omelet miaraka amin'ny garnish (Omelet)
Jaffle - Sandwich (Jaffle)
Jaffle dia sandwich efa mahazatra miaraka amin'ny famenoana isan-karazany, mazàna: tongolobe, atody, keso, voatabia, trondro sy ny sisa.
Ny sakafo dia matetika atolotra ao amin'ny fizarana sakafo maraina.
Ny lasopy any Sri Lanka dia tsy zakan'ny mpitory ary mahitsy. Ny fototera dia mitovy hatrany. Ny zavatra rehetra azonao raisina dia ny mifidy kojakoja fanampiny (hoho, akoho, trondro na legioma fotsiny, sns).
Ny sakafo any Lanka dia tena matsiro. Toa tsy misy dikany noho ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny tranga dia misy vary sy zavatra avy amin'ny voaniho, saingy raha ny marina, noho ny habetsaky ny menaka be dia be sy ireo fomba fahandro be dia be, izay karazana fahitana mamirapiratra sy matanjaka dia tanteraka .
Ho an'ireo izay tsy tia fety, dia tokony hoheverinao fa firenena any Azia Atsimo Atsinanana ny any Lanka, izay feno fofona manitra maintso ny sakafo rehetra. Noho izany, raha tsy tafiditra ao amin'ny drafitrao ny fampiasana ny manitra, aza hadino ny handidy ny saina rehefa handidy lovia. Lazao hoe "Fantaro ny Spicy." Tsy hahavonjy anao tanteraka amin'ny tsirony marevaka izany, fa mbola ataovy tsara kokoa amin'ny fahazarana ataonao :).
Misaotra ny mpanoratra tamin'ny famerenana fohy sy feno.
Mahatsapa ianao fa manao gourmet ary mahatakatra zavatra betsaka momba ny sakafo, saingy mandritra izany fotoana izany, ny matihanina dia tsy "miparitaka" amin'ny toe-javatra.
Tao Sri Lanka aho ary marihiko fa tsy misy tsy mitovy ny karieran'ny vary. Ary ny fanompoana amin'ny fanompoana sy ny lovia ihany.
Ankoatr'izay, ny vidin'ny ao amin'ny kafe rehetra dia azo antenaina be.
Tamin'ny Janoary 2020, ary 600 rupees fotsiny io lovia io. Ary ny ampahany iray dia mamela ny sakaiza rehetra hihinana sakafo be.
Tuna trondro (tuna) .. tsy natao ho an'ny rehetra. Tena malaza izy ao. Ny fahitana amin'ny fahafaham-po sy ny tsiro mamiratra. Saingy tsy ny olon-drehetra no maniry azy.
Saingy rehefa avy nanandrana trondro dibera .. tonga dia tia azy tamin'ny voalohany. Ary toa mahafinaritra sy mahafinaritra tokoa izany, ary raha ny tsirony dia tsy mitombina, raha ny hevitro izany. Ho an'ireo izay tia trondro malefaka dia manome torohevitra anao aho manandrana!
Izaho koa nanandrana hoppers ..
Ny pancakes toy izany dia multifunctional.
Amin'ny endrika mamy .. mandroba azy ireo ao anaty dite .. ary mankafy toy ny biscuit matsiro izy ireo. Lovia tena mahaliana.
Ary raha tsy eo amin'ny dikan-mamy, fa miaraka atody atody mahitsy ao anaty hopper .. dia mivoaka ny tsiro mitovy.
Sri Lanka, toy ny mpankafy sakafo matsiro, amin'ny ankapobeny, dia faly be aho.
Valentina. Misaotra anao tamin'ny fanehoan-kevitra mampita.
Ny mahavariana dia ny firaisan-kevitry ny mpanoratra dia firaisana tanteraka amin'ny anao momba ireo lovam-pisakafoanana ao Sri Lanka izay noresahinao tamin'ny hevitrao.